Dadka Kenya ma labo madaxweyne ayay kala aqoonsanyihiin? – Breaking News,Business, Kenya, Somalia, Politics, Lifestyle, Sports
Dadka Kenya ma labo madaxweyne ayay kala aqoonsanyihiin?
STN News February 3, 2018 Leave a comment
Waxaa isa soo taraya xiisada siyaasadeed ee ka taagan dalka Kenya tan iyo markii hoggaamiyaha mucaaradka Raila Odinga uu iskiis isugu dhaariyay in uu yahay madaxweynaha shacabka 30-kii bishii Janaayo.
Inkasta oo dowladda Kenya ay illaa hadda muujisay is xakamayn badan iyo taxadar, haddane waxa ay u egtahay in ay qaadayso talaabooyin is xigxiga oo istaraatiijiyadaysan.
Mid mid ayaan isu dul taagaynaa waxyaabihii dhacay tan iyo maalintaas, iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee dhacay.
Waxa ay ahayd maalin taariikhda Kenya ka gashay baal mugdi ah ama baal dahab ah hadba dhinaca qofka aragtidiisa ay jirto iyo cidda uu taageersanyahay.
Waxa ay maalinta ku bilaabatay iyada oo ciidammada rabshadaha ka hor taga iyo booliiska ay isku gadaameen beerta Uhuru Park oo ay mucaaradka qorsheynayeen in ay ku qabtaan xafladda dhaarinta.
Balse muddo yar gudahood waxaa cadaatay in ciidanka aysan xakamayn karin hirarkii dadka ahaa ee soo buux dhaafiyay beerta, kuwaas oo sida muuqatay usoo diyaar garoobay geeri iyo nolol, iyaga oo ogaa amaradii is daba jooga ahaa ee ay dowladda kasoo saaraysay isu imaatinkaas.
Barqadii marka la marayo, oo xamaasadda iyo shucuurta dadka Uhuru Park ay cirka isku shareertay, si toos ahna looga tabinayay taleefishinada gaarka loo leeyahay, dalka oo dhana uu markaliya jawiga is badalay ayay dowladda qaaday talaabadii koowaad, waxayna hawada ka saartay 3 idaacadood oo kuwa la’iska arko ah iyo raadiyeyaal ka qeyb qaadanayay tabinta tooska ah.
Taleefishinada hawada laga saaray ayaa kala ah KTN, Citizen iyo NTV.
Waxay ahayd talaabo dhabarka ka jabisay mucaaradka oo doonayay in ay awoodda dalka kula wareegaan dareen shacab.
Maalintii oo dhan kumanaanka kun ee taageerayaasha mucaaradka, kuwaas oo qaarkood meelo dhaadheer lug uga yimid ayaa iyaga oo jibeysan tubnaa cadceeda.
Markii la gaaray galinkii dambe ayaa waxaa fagaaraha kasoo muuqday ninkii ugu muhiimsanaa oo ay sugayeen, kaas oo ah Raila Odinga, balse nasiib daro lama uusan soconin Kolonsp Musyoka oo ay ahayd in isna madaxweyne ku xigeen loo dhaariyo.
Hawsha dhan waxa ay qaadatay wax ka yar 15 daqiiqo, Raila waxa uu saxiixay warqad, wuxuuna ku dhaartay kitaabka masiixiyiinta, iyada oo dhaarta uu hagayay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka oo lagu magacaabo Tom Kajwang , kaas oo usoo labistay sidii xaakimka maxkamadda sare.
Maalinta sidaas ayay ku dhamaatay, taageerayaashiina guryahooda ayay ku laabtay iyada oo aysan wax rabshad iyo dhib ah dhicin.
Isla maalinkiiba dowladda waxa ay soo saartay war qoraal ah oo dhaqdhaqaaqa mucaaradka ee NRM ay ku summaddo in uu yahay urur dambiileyaal abaabulan ah, islamarkaasna uu yahay urur mamnuuc ah.
Waxa kale oo dhacday in ay askartii illaalada ahayd kala noqotay dad muhiim ah oo mucaaradka ka mid ah.
Madaxweyne ku xigeenka Kenya William Ruto oo ka hadlay is dhaarinta Raila ayaa ku tilmaamay arrin majaajilo ah, islamarkaasna aysan soo kordhinaynin wax micno ah.
Kadib shirar is daba joog ah oo ay yeesheen golaha amniga qaranka Kenya, ayaa waxaa la go’aansaday in la xiro dad isugu jira wariyeyaal, iyo siyaasiyiin iyo xitaa kuwa wax ku qora baraha bulshada.
Warar kusoo baxay bogaga hore ee wargeysyada waaweyn ayaa lagu sheegay in mucaaradka ay aad ugu kala qeybsameen dhaarintii Raila, taasna ay ahayd sababta uu Kolonzo u iman waayay.
Balse hoggaamiyeyaasha afarta ah ee mucaaradka, Raila, Kolonzo, Mudavadi iyo Watangula ayaa shalay (khamiistii) shir jaraa’id si wada jir ah u qabtay ayaa sheegay in ay mideysanyihiin, iyaga oo dowladda ku eedeeyey handadaad iyo jalaafayn ay ku samaynayso siyaasiyiinta mucaaradka ah.
Kolonzo ayaa shirka jaraa’id dhexdiisa baroortay, wuxuuna sheegay in iyada oo xaaskiisa oo xanuun la il daran ay guriga u joogto, haddane lagu soo weeraray garneelo, islamarkaasna lagala noqday askartii illaalada u ahayd, taasna ay u suurtogalin weysay in uu dhaarto kasoo qeybgalo.
Shirkadaha warbaahinta ayaa maxkamad sare ka dacweeyay dowladda, taas oo amar ku bixisay in la fasoxo taleefishinada, balse illaa maanta waa ay xiranyihiin idaacadaha.
Waxaa kale oo dhacday in maamulka sare ee taleefishinada iyo qaar ka mid ah wariyeyaasha ugu caansan ay labadii habeen ee ugu dambeeyay ku hoyday xafiisyadooda iyo goobta shaqada kadib markii askarta booliiska ay albaabka usoo istaageen, kuwaas oo la sheegay in ay damacsanaayeen in ay xiraan.
Qeybaha kala duwan ee bulshada rayidka ah iyo beesha caalamka ayaa si isku mid ah u cambaareeyay talaabada ay dowladda ay ku xirtay taleefishinada.
Inkasta oo ay maxkamadda amartay, illaa iyo hadda hawada ayay ka maqanyihiin taleefishinada.
Maxaa ugu dambeeyay?
Mid ka mid ah siyaasiyiinta ugu hadalka cad ee mucaaradka oo lagu magacaabo Miguna Miguna ayay saakay gurigiisa ciidamo u dhaceen, islamarkaasna xireen.
Miguna oo aad looga yaqaano Kenya, ayaa muuqaalo laga soo qaaday gurigiisa waxa ay muujinayaan burbur ka muuqda gurigiisa, iyada oo ay muuqatay in xoog lagu galay guriga.
Miguna ayaa shalay dowladda ku wargaliyay in ay isaga xiraan, islamarkaasna uusan xarig dan ka lahayn.
Waxaa kale oo xabsiga la dhigay xildhibaan Kajwanga oo ahaa qofkii dhaariyay Raila, balse maxkamad ayaa kusoo siidaysay damaanad lacageed.
Waxaa soo baxay warar sheegaya in laga yaabo in Raila laftiisa la xiri doono, laguna soo oogi doono dambi qiyaano qaran, balse marka hore dowladda ay usoo dhabacanayso dharbaaxada ay la maagantahay Odinga.
Labo Madaxweyne ?
Waxa ay dad badan is weeydinayaan in Kenya ay yeelatay labo madaxweyne, balse xaqiiqda ayaa waxa ay tahay in talada dalka ay si ebyan wali gacanta ugu jirto madaxweyne Uhuru Kenyatta, waxaana si caadi ah u shaqaynaya laamaha dowladda ee kala duwan.
Madaxweyne Uhuru Kenyatta wali kama uusan hadlin waxa dhacay, kamana uusan soo muuqan warbaahinta tan iyo intii uu kasoo laabtay shirkii midoowga Afrika ee Adis Ababa 30-kii Janaayo, xiligaas oo ciidammada xoogga ay garoonka Jomo Kenyatta ugu sameeyeen maamuus culus.
Mr Odinga ayaa sheegay in uu isagu ku guulaystay doorashadii madaxwaynanimada sanaddii aanu soo dhaafnay balse looga shubtay. Odinga ayaa saacado kooban boggiisa Twitter-ka ee rasmiga ah ku qoran in uu yahay madaxweynaha Kenya, balse markii dambe waa laga tirtiray xogtaas.
Waxaa laga yaabaa in malaayiin qof oo taageerayaashiisa ah ay hadda u yaqaanaan in uu yahay ‘madaxweyne’, balse ma jirto cid wali u aqoonsatay xilkaas iyo meel uu isaga amarkiisa ka socdo.
Guddiga doorashada Kenya ayaa waxay sheegeen in doorashad26-dii Oktoobar, 2017-kii uu ku guulaystay madaxwayne Uhuru Kenyatta, waxaana go’aankaas markii dambe qalinka ku duugay maxkamadda sare oo markii hore laashay natiijadii doorashadii dhacday bishii Agoosto oo uu Raila aaminsanyahay in uu isaga ku guuleystay .
← Wiil Soomaali ah oo lagu dhex dilay xabsi ku yaala London.
Ruushka oo gaashaanka u daruuray siyaasadda nukliyeerka ee Mareykanka. →